Thursday January 30, 2020 - 19:27:57 in Wararka by
Hoggaanka Xarakada Al Shabaab ayaa ku bogaadiyay Jamaacada Jihaadiga JNIM dagaalka ay kula jirto soo duulayaasha Faransiiska iyo ciidamada dowladaha Saaxilka G5 oo ah isbahaysi duullaan gardarra ah ku qaaday muslimiinta Maali.
"Salaan iyo qadarin ku socota geesiyada Islaamka ee ribaadka kaga jira Maali,
Waxaan ku bilaabaynaa magaca Ilaaheey Allahaas oo kitaabkiisa ku sheegay in uu sare u qaaday kalimadiisa, hoosna u dhigay kalimadda gaalada" ayaa lagu bilaabay bayaanka.
Al Shabaab ayaa mujaahidiinta Maali ku ammaantay sida ay ugu sabrayaan awoodaha kala duwan ee iskusoo bahaystay waxayna ku bogaadisay in ay sii laba laabaan beegsashada cadowga jinsiyadaha kala duwan leh ee Maali ku duulay.
"Waxaan idinku dhiiri gelinaynaa in aad dhabbahaas Jihaadka kusii socotaan aadna xoojisaan dharbaaxooyinka aad u geysanaysaan saliibiyiinta iyo murtadiinta goob walba oo aad ku aragtaan guushuna way dhowdahay, kadibna guutooyinka Mujaahidiinta oo goob walba iskaga yimid waxay ku kulmi doonaan barxadihii Al-aqsaa iyagoo takbiirsanaya maalinka Fatxiga weyn uu dhici doono" ayaa lasii raaciyay bayaanka.
Jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan JNIM ayaa kamid ah Ururka Al Qaacidda Faraciisa Maqribul Islaam waxayna jamaacadan bilihii lasoo dhaafay weeraro fariid ah ka fulinaysay wadamada kala ah Burkina Faso,Maali iyo Niger.